Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Butylene Glycol sy Propylene Glycol | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Butylene Glycol sy Propylene Glycol | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Home / Science & Nature / Science / Simia / Organic Simia / Inona no maha samy hafa Butylene Glycol sy Propylene Glycol
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny butylene glycol sy propylene glycol dia ny butylene glycol dia manana atôma karbonika efatra sy vondrona roa -OH izay miraikitra amin'ny atôma karbonika roa. Raha ny propylene glycol kosa dia misy atôma karbonika telo sy vondrona roa -OH izay miraikitra amin'ny atôma karbonika roa.
Ny glycols dia fitambarana simika misy tarika roa -OH na vondrona misy alikaola mifatotra amin'ny atôma karbonika. Ny butylene glycol sy ny propylene glycol dia diol roa toy izany izay manana atôma karbonika isan-karazany.
2. Inona no atao hoe Butylene Glycol
3. Inona no atao hoe Propylene Glycol
4. Butylene Glycol vs Propylene Glycol amin'ny endrika Tabular
Inona ny Butylene Glycol?
Ny butylene glycol dia fitambarana organika manana ny raika simika C4H10O2. Izy io dia misy atôma karbonika efatra, ary misy vondrona roa -OH mifamatotra amin'ireo atôma karbonika roa. Noho izany, toaka izy io, ary satria misy vondrona roa -OH, dia azontsika antsoina hoe diol io. Misy isomeram -bolo efatra an'ny butylene glycol, saingy misy isomeroma roa isomeran'ny butylene glycol; Glycol 1,3-butylène ary glycol 2,3-butylène.
1,3-butylene glycol na 1,3-butanediol dia misy vondrona alikaola roa (-OH) mifamatotra amin'ny atôma karbonika voalohany sy fahatelo amin'ny rojo atômika karbôna efatra. Izy io dia miseho ho toy ny ranoka tsy misy loko sy tsy voavahan-drano. Azontsika atao ny manamboatra an'io fanafody io amin'ny alàlan'ny hydrogenation of 3-hydroxybutanal, izay manome 1,3-butanediol, ary aorian'izany ny tsy fahampian'ny rano 1,3-butanediol hamorona glycol 1,3-butylene amin'ny alàlan'ny fanehoan-kevitra fanampiny -OH. Ity akora ity dia ilaina amin'ny maha-agents hypoglycaemic.
Sary 01: firafitry ny glycol 1,3-butylène
2,3-butylene glycol na 2,3-butanediol dia fitambarana organika manana endrika stereoisomer telo. Ireo endrika isomerika rehetra ireo dia miseho amin'ny endrika tsy misy loko. Ny roa amin'ireo isomera ireo dia enantiomer, ary ny fitambarana iray dia tambatra meso. Azontsika atao ny mamokatra an'io fanafody io amin'ny hydrolysis an'ny 2,3-epoxybutane. Ankoatr'izay, ity akora ity dia ilaina amin'ny famokarana butene amin'ny alàlan'ny deoxydehydration.
Butylene glycol dia ilaina amin'ny famokarana vokatra toy ny shampoo, conditioner, lotion, menaka anti-antitra, saron-tava, tarehy ary tarehy. Ilaina koa izy io ho toy ny solvent manampy ireo akora mavitrika izay mety ho lasa mangatsiaka ho levona.
Inona ny Propylene Glycol?
Propylene glycol dia fitambarana organika manana ny raika simika C3H8O2. Rano manjavozavo sy tsy misy loko izy io, izay saika tsy misy fofona ary misy tsiro mamy kely. Misy vondrona alikaola roa ao amin'ny molekiola propylene glycol. Misy atômôna karbaona telo ao anaty rojo iray izay misy vondrona alikaola roa mifamatotra amin'ny roa amin'ireo atôma karbonika ireo. Noho izany, diol io. Ankoatr'izay, ity ranoka ity dia mety ho diso amin'ny solvents maro toy ny rano, acétone, ary chloroform.
Sary 02: firafitry ny Propylene Glycol
Propylene glycol dia azo vokarina amin'ny ambaratonga lehibe, indrindra ho an'ny famokarana polymers. Amin'ny ambaratonga indostrialy, io akora io dia novokarina tamin'ny alàlan'ny oksida propylene. Ity akora ity dia ampiasaina amin'ny indostrian'ny sakafo, famokarana fanafody, ary famokarana kosmetika. Ilaina izy io ho solvent ho an'ny akora voajanahary sy synthetic, ho humectant, ho depressant point, toy ny carrier na base amin'ny famokarana kosmetika, mba hamandrihana sy hitehirizana bibikely, sns.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Butylene Glycol sy Propylene Glycol?
Ny butylene glycol dia fitambarana biolojika manana ny piraika simika C4H10O2, raha Propylene glycol kosa dia fitambarana organika manana ny raika simika C3H8O2. Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny glycol butylène sy ny glycol propylène dia ny butylene glycol dia manana atôma karbonika efatra izay misy vondrona roa -OH miraikitra amin'ny roa amin'ireo atôma karbonika, fa ny propylene glycol kosa dia misy atôma karbonika misy vondrona roa -OH mifatotra amin'ny roa amin'ireo carbon ireo atôma.
Ity infographic etsy ambany ity dia mitanisa ireo fahasamihafana misy eo amin'ny butylene glycol sy propylene glycol amin'ny endrika tabilaoro ho an'ny fampitahana mifanila.
Famintinana - Glycol vs Propylene Glycol
1. Watson, Kathryn. " Butylene Glycol: topy maso, fampiasana, tombony, vokany ary risika ." Healthline , Media momba ny fahasalamana, 20 feb 2019.
1. " 1,3-Butanediol " Nosoratan'i Edgar181 - Asa manokana (Public Domain) via Commons Wikimedia
2. " Rafitra simika Propylene glycol " (CC BY-SA 3.0) amin'ny alàlan'ny Wikimedia Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny alikaola Cetyl sy alikaola Stearyl Fahasamihafana eo amin'ny Alkanes mahitsy sy branched Fahasamihafana eo amin'ny asidra Benzoic sy Sodium Benzoate Fahasamihafana eo amin'ny synthesis sy ny Retrosynthesis Fahasamihafana eo amin'i Anisole sy Diethyl Ether
Fahasamihafana eo amin'ny Cortisone sy Cortisol (Hydrocortisone)
Fahasamihafana eo amin'ny drafitra sy ny paikady
Fahasamihafana eo amin'ny Heathrow Connect sy Heathrow Express